Semalt विशेषज्ञ: B2B ईमेल मार्केटिंग को उपयोग कसरी गर्ने
Y० प्रतिशत भन्दा बढी विपणकहरू र व्यवसायहरूले उनीहरूको सामग्री मार्केटिंग रणनीतिहरूको हिस्साको रूपमा ईमेल न्यूजलेटरहरू प्रयोग गर्दछन्, उनीहरूको उपयोगको सम्बन्धमा केवल ब्लग पोष्टहरू र सोशल मिडियाको पछाडि। त्यतिन्जेल, ईमेल मार्केटिंग उत्तम विकल्प हो र यो सब भन्दा विश्वसनीय च्यानल मानिन्छ जब यो B2B मार्केटरहरू बीच सामग्री वितरणको कुरा आउँदछ।
अनुमानले पत्ता लगायो कि B2B मार्केटिंगको ety ० प्रतिशत भन्दा बढिले यो मार्केटिंग युक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छन् र उनीहरूको ofxt प्रतिशतले आफ्नो कामहरू सम्पन्न गर्न समर्पित ईमेल प्लेटफार्महरू प्रयोग गर्छन्। यो सुरक्षित छ B2B ईमेल मार्केटिंगले अत्यधिक लोकप्रियता लिएको छ किनकि यसले लगानीमा फिर्ताको सुनिश्चित गर्दछ। अमेरिकीहरू र युरोपियनहरू भन्दा नब्बे प्रतिशतले दैनिक आधारमा ईमेलहरू प्रयोग गर्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो खुलासा भएको छ कि ईमेलले सत्तर प्रतिशत उच्च मूल्यको साथ, सामाजिक नेटवर्किworking साइटहरूको डबल दरमा खरीदहरू प्रोम्प्ट गर्न सक्दछ।
ओलिभर किंग, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, यहाँ ईमेल मार्केटिंगबाट फाइदा लिनको लागि मार्गनिर्देशन वर्णन गर्दछ।
जब यो मार्केटरहरूको कुरा गर्ने कुरा आउँछ, हाम्रो दिमागमा प्रहार गर्ने पहिलो चीज ढोका-ढोका विक्रेताहरू हुन्। तिनीहरू भाग्यशाली छन् किनभने उनीहरूले जीउन कमाउनको लागि प्रशस्त अवसरहरू प्राप्त गर्छन्, जबकि ईमेल मार्केटिंगमा धेरै राजाहरू पठाउनु समावेश छ राजस्व उत्पन्न गर्ने ग्यारेन्टीको साथ। इनबाउन्ड मार्केटिंग साइबरस्पेसमा स्टोरफ्रन्टहरू सिर्जना गर्ने एक तरिकाको रूपमा मानिन्छ। तपाइँको साइट को सामग्री निर्णय गरीनेछ कि कति ग्राहकहरु यसलाई आकर्षित हुनेछ।
यो सत्य हो कि ईमेलहरूले खाली पार गर्दछ। जसले सामग्री मार्केटिंगमा निर्भर छन् उनीहरूले सम्झनु पर्छ कि उनीहरूले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यदि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँको क्लाइन्टहरूले तपाइँ अनुकूलित सर्तहरू खोज्नेछन् र तपाइँको वेबसाइट वा सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा पुग्नेछ, तपाइँ एक ठूलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। यसको विपरित, ईमेल मार्केटिले तपाईंलाई प्रशस्त ग्राहकहरू प्राप्त गर्न सक्छ, यो सुनिश्चित गरेर कि तपाईंको आवाज सँधै इन्टरनेटमा सुनिन्छ। ईमेल मार्केटिंगको साथ, तपाईं सजिलै आफैंलाई ठूलो संख्यामा ग्राहकहरूको अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको सन्देशहरू तिनीहरूको ईनबक्सहरूमा पठाउन सक्नुहुन्छ। कसरी ती सन्देशहरूमा ती प्रतिक्रिया गर्दछ तपाईं कसरी तपाइँको उत्पादन वा सेवाहरू तिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो मा निर्भर गर्दछ। मलाई यहाँ बताउनुहोस् कि यो आउटबाउन्ड मार्केटिंग होइन।
सम्भावनाले तपाईंलाई बेवास्ता गर्न सक्दछ त्यसैले यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ईमेल अन्य समान ईमेलहरू भन्दा फरक छ र ग्राहकहरूलाई संलग्न गराउन प्रयास गर्नुहोस्। यो एक मात्र तरिका हो कि तिनीहरूले यसलाई मेटाउने छैनन् उत्पादन विवरण जाँच नगरी।
संक्षेपमा, B2B ईमेल मार्केटिंगले तपाईंलाई धेरै व्यक्तिहरूमा सिधा पहुँच पुर्‍याउँछ र तपाईंको तनावलाई ठूलो हदसम्म कम गर्दछ। केही व्यक्तिहरू, तथापि, तपाईंको ईमेलहरू निराश र कष्टकर फेला पार्न सक्छन् र तपाईंको आईडीहरू ब्लक गर्न छनौट गर्न सक्दछन् तर तपाईंले उनीहरूको निर्णय लिन दिनुपर्दछ।
B2B उत्तम अभ्यासहरू
उपयोगी B2B ईमेलले व्यवसाय-देखि-उपभोक्ता समकक्षहरूको समान विधिहरू अनुसरण गर्दछ:
१. पहिचान र जरुरीताको भावना सिर्जना गर्नका लागि गहन विषय लाइनहरू जुन जोडतोडको भावना विकास गर्दछ।
२. प्रत्यक्ष पाठहरू जुन प्राप्तकर्ताहरूको समय खेर फालिन वा बेकार गर्दैन।
Appeal. भिडियो र कस्टम इमेजरी सन्देश अपीलिंग र शानदार तरीकाले तोड्नका लागि।
Lay. लेआउटहरू जुन तपाईंको ईमेलहरू पढ्न सजिलो बनाउँदछ र महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू हाइलाइट गर्दछ।
संक्षिप्तमा, व्यवसायहरूले ठूलो संख्यामा व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न विश्वास निर्माण गर्नुपर्नेछ, यो सुनिश्चित गर्दै कि तपाईंको ग्राहकहरू तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरूमा खुसी छन् र सन्तुष्ट छन्। तपाइँले सामग्री बिपणन रणनीतिले तपाइँको B2B ईमेलमा सन्देशहरूलाई ब्याक अप गर्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्दछ।